Nemanja Matic oo Mustaqbalkiisa kala hadlaya kooxdiisa Manchester United kaddib markii keydka la dhigay kulamadii dhowaa – Gool FM
(Manchester) 27 Agoosto 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United. Nemanja Matic ayaa lagu soo waramayaa inuu dalbaday in miiska wadahadallada uu la fariisto madaxda kooxdiisa si uu ugala xaajoodo wax ku saabsan mustaqbalkiisa Naadiga.
Raaca dhisahii hore ee kooxda Chelsea ee Matic ayaa diiwaanka ku heysata kaliya 87 kulan oo uu u saftay Man United tartammada oo dhan tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 2017-kii, xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia ayaan boos joogto ah ka helin safka hore ee kooxda ku ciyaarta garoonka Tiyaatarka Riyada.
Nemanja Matic ayaa boos ka waayay shaxda macalin Ole Gunnar Solskjaer ee Man Utd, mana uusan ka soo muuqan saddexdii kulan ee ugu horreysay ee Premier League, walow ay guuleysteen hal kulan labada kulan ee kalana ay guuldarro iyo barbaro la kulmeen.
Warsidaha ka soo baxa dalka England ee The Mirror ayaa fahansan in ciyaaryahanka uu bilaabay inuu weydiiyo madaxda kooxda su’aalo la xiriira doorkiisa kooxda ka dhisan Waqooyi-Galbeed ee Ingiriiska.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Matic uu doonayo inuu wadahadallo toos ah la yeesho tababare Ole Gunnar Solskjaer, kaasoo muujinaya doorbididda ciyaartoyda da’da yar iyo in isaga uu heli karo fursado kale oo uu door muhiim ah ugu yeelan karo qorshahiisa.
Si kastaba ha ahatee, Matic qandaraaskiisa kooxda Red Devils waxaa ka haray wax ka yar hal sano, in kastoo Man United ay awood u leedahay inay sii dheereyso heshiiskiisa oo ay ku darto 12 bilood oo kale, lamana oga Jawaabta uu heli doono wayeelka reer Serbia ee ku wanaagsan burburinta kubadda cagta.